Dagaal caawa ka socda Beled Xaawo iyo Ciidanka C/rashiid Janan oo gudaha u galay.... -
Home News Dagaal caawa ka socda Beled Xaawo iyo Ciidanka C/rashiid Janan oo gudaha...
Dagaal caawa ka socda Beled Xaawo iyo Ciidanka C/rashiid Janan oo gudaha u galay….
Dagaal ayaa ka socda gudaha degmada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, halkaasoo saqdii dhexe ay soo duulaan ku soo qaadeen Ciidamada C/rashiid Janan oo in muddo saldhig ku lahaa agagaarka magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Wararka ayaa sheegaya in xaafado ka mid ah Beledxaawo qabsadeen ciidankaas huwanta ee uu horkacayo C/rashiid Janan.
Saraakiil ka tirsan Jubbaland ayaa sheegaya in gebi ahaanba ay la wareegeen Beled Xaawo, haatan uu dagaalka ka socdo dhanka wadada aada Doolow.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa qoraal uu bartiisa Facebook ku daabacay ayaa sheegay jabhad ay soo hubeysay dowladda Kenya ay caawa soo weerartay Beledxaawo.
“Jabhaddii fallaagada ahayd ee ay soo hubaysay Dowladda Kenya oo caawa u soo tallowday xuduudda Soomaaliya ayaa soo weerartay Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Beled Xaawo. Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo ah ugu jilib dhigay duulaankaas sharci-darada ah ee shisheeyuhu soo abaabulay”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay inuu si adag u cambaareynayo duulaankaas laga soo abaabulay gudaha Kenya
“Waxan si adag u cambaaraynaynaa duulaankaas gardarada ah ee laga soo abaabulay gudaha Kenya kaas oo qilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta Gobolka iyo xeerarka caalamiga ah ee ku dhisan is xaq dhawrka iyo ilaalinta madaxbaanaanida qaranimo”ayuu yiri.
Xaalada degmooyinka Beled Xaawo, Luuq iyo Doolow ay bilihii la soo dhaafay aheyd mid kacsan, halkaasoo dowladda Federaalka ciidamo fara badan geysay, waxaana deegaanadaas ka jiray xiisado dagaal.
Previous articleSweden bans travel entry from Norway tonight
Next articleSweden ayaa mamnuucday dadka ka soo gala Norway caawa